Maharitra hafiriana ny fitiavana? Ireo lafin-javatra 6 izay manan-danja. - Fifandraisana
Angamba ianao olona lavo loha mandritra ny herinandro maromaro, na angamba mandrehitra miadana kokoa ianao.
Fa mandra-pahoviana izy io Raha ny marina raiso am-pitiavana?
Toa raiki-pitia ny tsirairay, na farafaharatsiny Eritrereto manana izy ireo, amin'ny taha isan-karazany sy amin'ny tanjany samy hafa.
Ny taonanao, ny tantaram-piainanao, ny toetranao ary ny fahaizanao ara-pihetseham-po dia mety hanana anjara toerana amin'ny faharetan'ny fitiavana, ary koa antony vitsivitsy…
Ity lahatsoratra ity dia hijery ireo anton-javatra ireo amin'ny antsipiriany kokoa.
Ny taonantsika afaka misy fiantraikany amin'ny hafainganan'ny fahatsapantsika haingana amin'ireo mpiara-miasa vaovao.
Izany dia vokatry ny antony maromaro, ao anatin'izany ny fitsipahana loza mety hitranga any aoriana any, ary koa ny traikefa.
Ohatra, ny olon-dehibe tanora na tanora dia mety hahatsapa ho toy ny hoe raiki-pitia haingana be izy ireo.
Izany dia satria ny fahatsapana matetika dia tena vaovao ary mety hihoatra ny fahatongavan'izy ireo ho haingana dia haingana.
firy taona i danielle cohn
Ny tanora dia tsy mbola niatrika famoizam-po na fahasimban'ny fifandraisana tamin'ny fomba nitovizan'ny mpivady efa antitra, ohatra.
Ity dia mitana andraikitra lehibe amin'ny hafainganana amin'ny fitiavan'ny tanora kokoa, satria jamba izy ireo amin'ny fanaintainana na risika mety hitranga miaraka aminy.
Ireo izay zokinjokiny dia mety efa nandalo fisarahana maromaro, mety nahazo fisaraham-panambadiana, na mety hahafantatra bebe kokoa ny loza ateraky ny fifandraisana.
Araka izany dia mailo kokoa izy ireo raha mitia amin'ny resaka fitiavana.
Amin'ny lafiny iray, dia mety hihazona azy ireo tsy hahatsiaro tena loatra izy ireo, midika izany fa miadana kokoa ny fitiavany. Mampihena ny fizotrany izy ireo noho ny fitaintainanana na ho tetikady fiarovana tena.
Manao ahoana ny tantaram-pifandraisanao?
Izany dia mandeha an-tanana miaraka amin'ny taona, mazava ho azy, fa ireo izay manana tantaram-pitiavana lava kokoa dia mety hisalasala kely kokoa raha ny amin'ny firotsahana amin'ny fifandraisana vaovao.
Raha naratra isika taloha, dia ara-dalàna ny mangina kely ary manandrana mandray zavatra tsy tapaka.
Ny olona miditra amin'ny fifandraisan'izy ireo voalohany dia matetika dia tena tia - indrindra raha samy mpiara-miasa izy ireo.
Ny fahatsapana izay mipoitra dia mahatsapa ho mafy kokoa noho ny mety ho an'ireo olona efa nanao fifandraisana matotra maro.
Ny mpiara-miombon'antoka vitsy dia vitsy antsika, ny fifamatorantsika haingana kokoa amin'izy ireo, ary ny halalin'ny firindrana voalohany.
Ireo izay nanana vady tsy nahatoky dia mety hahita fa ela kokoa ny fitiavany ny ho avy mpiara-miasa aminy, na eo aza ny tena fahatsapany.
Ity filma ity dia tokony hiarovantsika tena amin'ny fanaintainana mety hitranga dia ny fizarana mekanika ary amin'ny lafiny sasany, evolisiona ampahany.
Mianatra miaro tena amin'ny zavatra heverintsika fa hahatonga antsika hanimba ara-batana na ara-pihetseham-po, izay misy dikany tanteraka.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa samy hafa ny olon-drehetra, ary noho izany dia hafa koa ny fifandraisana rehetra.
Ireo izay nivadika dia mety hahita ny tenany ho sahirana hisokatra sy ho be fitiavana, na inona na inona iriny.
Ny tahotra handratra olona indray na hanana ao anatiny hamitaka olona iray izay ankamamin'izy ireo dia mety hahatsapa ho mandreraka rehefa resaka fifandraisana vaovao no resahina.
Mampihoron-koditra ny fisolokiana, mazàna ho an'ny olona roa ao anatin'ny fifandraisana - ny fahatsapana famadihana ary ny henatra dia mety hampihoron-koditra ho an'ny olona roa, ary mirona hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny ho avy izy roa.
Fa tsy tsotra foana toy ny milaza fa mitarika fitandremana ny ratram-po.
Ny sasany amintsika, rehefa pototry ny fisarahana, dia maniry mafy ireo fahatsapana firaiketam-po akaiky sy fitiavana, saika tonga amin'ny fitiavana haingana be satria tena tadiavintsika izany.
Misy dikany izany, fa zava-dehibe ny fahatsiarovan-tena ary alaivo antoka fa tena misy ny fahatsapanao alohan'ny hidiranao mafy amin'ny fifandraisana vaovao.
Hamarino tsara fa tena te hiaraka ianao izany olona fa tsy tsotra misy olona afaka mameno banga!
Ny sasany kosa dia naratra mafy noho ny alahelo ka saika natahotra ny hametraka ny mpiambina azy izy ireo, matoky olona, ​​ary ho tia indray .
Azo takarina izany, saingy miezaha tsy hanakatona ny tenanao tsy hahatsapa fihetseham-po tena izy satria matahotra ianao fa handratra.
Aza adino fa nanao izany ianao nandritra ny ratram-po farany ary hamakivaky fo iray hafa ianao - raha tokony hisy izany, mazava ho azy.
Ilay olona atahoranao hamela ny tenanao ho tia dia mety ho izy tokoa, ka tsy misy antony tokony hampiahiahy anao fotsiny!
Ny olona izay nanorotoro ny fon'ny hafa dia mety hisalasala handatsaka ny tenany amin'ny fifandraisana hafa ary mety hihazona ny fampiasana ny teny hoe 'L'.
Raha fantatrao fa manana ianao namarana ny fifandraisana ary namela olona torotoro fo tanteraka, mety hitebiteby kely ianao amin'ny hanaovana zavatra mitovy indray.
Mety nahatsapa ho nitia tamin'ny olon-tianao taloha ianao tamin'ny fotoana iray, ary mampatahotra anao fa tsy mahatsapa izany intsony ianao.
Mety matahotra ianao fa raha raiki-pitia amin'ny mpiara-miasa vaovao dia misy ny loza mety hitranga latsaka avy ny fitiavana miaraka amin'izy ireo , ary avelao ho maratra sy torotoro fo izy ireo.
fomba tsara indrindra hilazana amin'ny ankizivavy tianao
Loza mety hitranga foana io, mazava ho azy, mila manapa-kevitra fotsiny ianao raha mieritreritra fa mendrika izany.
Inona ny toetranao sy ny toe-tsainao?
Samy hafa tanteraka isika rehetra, izay tsy ahafahana mametraka fe-potoana tena izy amin'ny fihetsika rehetra, indrindra fa ny iray izay misy fihetseham-po mafy toy ny fitiavana.
Ny sasany amintsika dia tsy mahay mandanjalanja raha amin'ny lafiny toetrany - mirona isika 'manidina azy' raha ny resaka mandeha tsy misy drafitra (tapakila fiaramanidina tokana, na iza na iza?) Ary mety ho ‘fanaparitahana’ amin'ny fiainantsika ankapobeny.
Matetika izany dia mitarika antsika hiditra amin'ny fifandraisana vaovao ary ho tia haingana dia haingana.
Ireo izay manana karazana toetrany voatokana kokoa dia, mazava ho azy… voatahirina raha mikasika ireo karazana fahatsapana ireo.
Ny olona nanana fitaizana sarotra (tamin'ny alàlan'ny fisaraham-panambadiana na fanararaotana, ohatra) dia mirona amin'ny fitiavana haingana be.
Mety hahatsapa ho tsy miraharaha kely isika izay mety hitarika antsika hikatsaka ny fitiavana sy ny tombontsoa rehetra ao aminy - maniry izany fatorana ara-pihetseham-po izany isika maniry mafy ny firaisana SY fitiavana .
Matetika izany dia vokatry ny fahatsapana fa toa tsy nahatratra ireo zavatra ireo isika rehefa nihalehibe.
Mety hidika izany fa ny fahatsapantsika ny ‘fitiavana’ dia mety ho diso toerana kely rehefa mitady izany fifandraisana izany na aiza na aiza misy azy.
Ity dia zavatra tokony hotadidina mba tsy hivily lalana ny fihetsika sy ny fahatsapana sasany amin'ireo olona izay mety tsy afaka mahavita ny filantsika araka izay ilaintsika na tiantsika hataon'izy ireo.
Eo amin'ny lafiny toe-tsaina, ny fomba fijerintsika ankapobeny ny fiainana dia miharihary fa hisy fiatraikany amin'ny lafim-piainana rehetra - ao anatin'izany ny fitiavana.
Araka ny azonao an-tsaina angamba, ireo izay manana ny toetrany mitebiteby dia hitaky fotoana lava vao ho tia, na farafaharatsiny tonga saina fa nifankatia izy ireo (satria mety ho zavatra roa samy hafa be ireo!)
Ireo izay manahy na mitaintain-doha amin'ny zavatra maro dia mety hahita fanambadiana tena sarotra.
Ny fironana voajanahariny dia ny misaintsaina zavatra ary manahy ny amin'ny vokatry ny hetsika nataony - ary, raha misy olona iray hafa karakarainy ny fihetsik'izy ireo dia mety hihamafy tokoa ireo ahiahy ireo.
Ny fitiavana dia matetika mifantoka amin'ny fahatokisana ( amin'ny fifandraisana salama , farafaharatsiny!) izay zavatra mety hananan'ny olona manana saina mitebiteby mafy.
Vokatr'izany, ireo 'mpanelingelina' eo amintsika dia mazàna ela kokoa mifankatia, saingy, rehefa manao izany isika, dia milatsaka mafy - raha toa ka mendrika ny eritreretina be loatra, dia tokony ho lasa tsara tarehy manokana.
Etsy ankilany, ireo izay manana fomba fijery tsara sy milamina kokoa dia mety ho raiki-pitia haingana be.
Izany dia satria matetika izy ireo no voarindra (na efa nanao programmer kely) mba hahitana ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra.
Ireo mpandinika tsara dia mirona amin'ny fitiavana haingana. Be fanantenana izy ireo ary ny fanantenan'izy ireo fa handeha tsara ny zavatra dia ‘mamela’ azy ireo hahatsapa ny fihetsem-pony sy hatoky ny fizotrany.
Ny mahaliana dia ny olona mivoaka no afaka mandeha na amin'ny lafiny inona na iza - ny olona matoky tena dia mahazo aina tokoa amin'ny filatsahana fifandraisana vaovao ka mamela ny tenany hahatsapa zavatra lalina sy hitia azy haingana.
Ny karazana toetra matanjaka hafa dia zatra matoky tena sy faly amin'ny orinasany manokana, toky ary fitiavana ny tenany fa tsy maniry fitiavana am-pitiavana amin'ny fomba fanaon'ny olon-kafa.
Araka izany dia matetika izy ireo no mandray ny fomba ‘alaivo na avelao’ ho amin'ny fifandraisana sy ny fitiavana. Miaraka amin'ireo karazan-toetra ireo ny antony hafa, toy ny taona sy ny tantaram-pifandraisana mahatonga ny fahasamihafana.
Ahoana no hiverenan'ny fitiavana amin'ny mpiara-miasa aminao
13 Antony itiavako anao
Azo antoka fa manamarika ny fitiavanao olona iray dia tsy voavaly (Ary inona no hatao amin'izany)
Inona ny fahaizanao ara-pientanam-po?
Ny olona sasany dia mifandray bebe kokoa amin'ny fihetseham-pony sy ny an'ny olon-kafa. Io dia eo an-tampon'ny tena dikan'ny hoe faharanitan-tsaina (EQ).
Mandra-pahoviana ianao no raiki-pitia dia miankina amin'ny inona ny EQ anao.
Ireo manana EQ avo dia mety hamorona fatorana ara-pihetseham-po amin'ny olona iray haingana kokoa noho ireo izay manana EQ ambany.
Mazava ho azy fa ny ambaratonga avo lenta amin'ny fahatsapana ara-pihetseham-po dia mitarika amin'ny fahatsapana fitiavana mitombo haingana kokoa.
Fa ny zava-dehibe ihany koa dia ny fahatsapan'ny olona haingana fa mifankatia izy ireo. Ary ny faharanitan-tsaina dia mitana andraikitra eto koa.
triple h sy stephanie mcmahon
Ny olona manana EQ ambany dia mazàna tsy mamaky ny mariky ny fitiavana na tsy miraharaha azy ireo mandritra ny fotoana maharitra.
Raha mbola mety Raha ny marina mifankatiava, mety tsy ho fantatr'izy ireo hoe tena izy izy ireo.
Mety tena faly izy ireo mandany fotoana amin'ny olon-tiany ary mety hahatsapa ho tsara ny fomba fiarahan'izy ireo, saingy mety tsy hahatsapa ho lavitra izy ireo vonona ny hanambara ny fitiavany … Satria tsy resy lahatra izy ireo fa ny fitiavana no tsapany.
Etsy andaniny, ny olona manana EQ avo dia mety mamaky ny fihetseham-pony koa ary mino fa mifankatia izy ireo, rehefa matanjaka daholo ny tena tsapany fahatsapana firaiketam-po na koa filan'ny .
Raha atao teny hafa, ny faharanitan-tsaina avo lenta dia tsy midika hoe fanekena eo noho eo ny atao hoe fitiavana ary inona ny tsy fitiavana.
Lehilahy ve Ianao sa Vehivavy?
Ny miralenta dia mitana andraikitra lehibe amin'ny zavatra rehetra ataontsika, noho izany tsy mahagaga raha misy fiatraikany eo amin'ny fitiavantsika sy ny hamafin'ny fahatsapantsika izany.
Ny olona sasany dia mino fa ny lehilahy dia raiki-pitia haingana kokoa, na dia tsy izany aza ny fanehoana ankapobeny amin'ny boky sy ny romotra!
Matetika izahay mahita ny vehivavy mifankatia haingana be ary ny lehilahy miady amin'ny famaritana ny fahatsapan'izy ireo - mieritreritra ny sarimihetsika Hollywood rehetra momba ny vehivavy tia vehivavy sakaizan'izy ireo nandritra ny taona maro talohan'ny nahatsapan'ilay lehilahy fa tia ilay vehivavy koa izy ireo!
Ireo izay mieritreritra fa ny lehilahy dia mifankatia kokoa dia manondro ireo karazana toetran'ny lehilahy - amin'ny ankapobeny, dia tsy mpandinika be loatra…
… Ary ny vehivavy dia.
Ny vehivavy dia mirona amin'ny adin-tsaina na miahiahy bebe kokoa, mieritreritra ny vokany sy ny famantaranandro biolojika ary ny laza sns.
Vehivavy maro no mahita ny tenany amin'ny fahitana faharoa sy fahatelo amin'ny fihetsiny sy ny fihetseham-pony - midika izany fa tsy te hanaiky ny tenany izy ireo, sy ny mpiara-miasa aminy, fa mifankatia izy ireo.
Ny ankamaroan'ny lehilahy dia mirona hiaraka aminy fotsiny ary mieritreritra fa handeha ny zavatra!
Sarotra foana ny manisa ny fiantraikan'ny lahy sy ny vavy amin'ny fihetsika sy ny fahatsapana ananantsika, noho izany dia vao mainka sarotra kokoa raha ny fitiavana no resahina.
Tokony hotadidintsika fa ao anatin'ny lahy sy ny vavy, dia misy karazany maro karazana ary antsipiriany kely izay misy akony tokoa amin'ny maha-olona antsika.
Tsy ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra no mitovy, noho izany tsy azontsika antenaina hifanaraka amin'ny lamina milamina tsara ny zavatra niainan'izy ireo.
Tsara ny manamarika fa ny lafin-javatra rehetra tafiditra amin'ity lahatsoratra ity dia miara-miasa - misy fiatraikany amin'ny toetrantsika ny maha-lahy na vavy antsika, izay afaka manova ny fahazaran-dratsintsika rehefa eo am-pifandraisana…
Nanao ahoana ny fandrosoanao?
Impiry ahitanao ny sakaizanao dia mety hisy fiatraikany haingana amin'ny fitiavanao haingana.
Raha mampiaraka olona ianao ary mahita azy ireo matetika dia afaka mandeha na amin'ny fomba ahoana!
Ny olona sasany dia hahita zavatra maro kokoa izay tiany momba ilay olona mampiaraka aminy rehefa mandeha ny fotoana, izay mahatonga anao hianjera haingana kokoa hatrany.
Amin'izay fotoana izay, ny fahitana olona iray mampiaraka anao mandritra ny andro maro dia mety hidika fa mifankatia vetivety ianao.
Ny olon-kafa kosa mety mahita fa ny mahita olona betsaka dia saika manala azy!
Mety mbola eo ny fahatsapana, fa ny ‘fifandraisana’ (mifankahita betsaka ary tsy mahatsiaro tena ho manana fahaleovan-tena) dia mety hahatonga ny olona sasany te hiadana ary hamepetra ny tenany izy ireo ary hitazona ny fihetseham-pony.
Amin'ity tranga ity dia hitatra kely kokoa ny fitiavana.
Mazava ho azy, misy ny olona mandany fotoana be dia be miaraka amin'ny namana izay mampitombo fihetseham-po rehefa mandeha ny fotoana.
Tsy midika izany fa tsy henjana ny fahatsapana rehefa miseho izy ireo, mazava ho azy.
Ny fifamatorana sasany dia manomboka amin'ny maha-mpinamana, ary ireo dia mety haharitra ela. Olona roa dia mety mifankatia fomba platonic be , fa mety mbola misy ny intimité be any.
Ny namana roa dia afaka mifampikarakara be dia be, ary tena manohana sy miaro azy ireo amin'ny resaka fiarahana amin'ny olon-kafa.
Ny fialonana dia fahatsapana voajanahary eo amin'ny namana, na dia tsy misy fahatsapana fitiavana aza.
Indraindray io fialonana io dia mety hiteraka fotoana 'izao na tsy misy mihitsy' rehefa tsapanao tampoka fa tsy tianao ny miaraka amin'ny olona mampiaraka azy ny namanao ary tianao hiaraka aminao izy ireo.
Sarotra ny manondro rehefa mifankatia ireo namana miara-miafara. Ho an'ny sasany, dia may mirehitra miadana sy feno fitiavana izay miseho tanteraka rehefa misy zavatra ara-batana (oroka, ohatra) izay manova ny fifamatorana amin'ny fisakaizana mankany amin'ny mety ho vady.
Amin'ny faran'ny spektrum dia ny fiheverana fa ny fitiavana dia mety hitranga eo noho eo rehefa mahita olona iray manokana.
Ankehitriny, tsy afaka mandanjalanja tokoa amin'ity iray ity isika - tsy misy siansa tena marina azontsika itodihana eto ary, araka ny noeritreretinao azy izao, ny 'fitiavana' dia mety ho sarotra faritana!
Tena mino ny fahatsapana isika amin'ny fahitana voalohany, na fitiavana izany, na ara-batana, na ara-panahy bebe kokoa.
Ho an'ny sasany, misy fahatsapana fifandraisana lalina izay mihoatra ny zava-misy - mahazo traikefa deja-vu amin'ny olona sasany izahay ary mahatsapa ho akaiky azy ireo avy hatrany.
Ho an'ny maro, ity dia mifandray amin'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray (ny fahatsapana fa ity olon-tsy fantatra ity dia olona efa fantatr'izy ireo taloha) na mety amin'ny ambaratonga mitovy-panahy izany.
Ny zava-dehibe tokony tadidio eto dia ny ‘fitiavana’ dia tsy mitovy amin'ny olon-drehetra, ary ny zavatra niainan'ny tsirairay momba azy dia ho hafa.
Ny olona sasany dia mihambo ho ‘mahalala’ eo no ho eo rehefa mihaona amin'ilay 'izy ireo', ary iza isika hilaza raha marina izy ireo sa tsia ?!
Aza adino: ny fitiavana ihany no ilainao
Ka, araka ny natsangantsika, dia tena sarotra ny mamaritra mazava tsara hoe mandra-pahoviana no raiki-pitia.
Ny fitiavana dia sarotra be amin'ny azy, ka sarotra be ny mandinika ireo anton-javatra rehetra izay mitana andraikitra.
Ny hafatra lehibe tokony esorina amin'ity dia ny fahatsapantsika ny zavatra tsapantsika, rehefa tsapantsika izany.
Tsy afaka mirotoroto ny tenantsika hiaina fihetsem-po sasany isika ary tsy tokony hisy ny fanerena hiteny ny teny hoe 'L', na dia betsaka aza ny zavatra tsapanao fa 'tokony' nilazanao izany!
Ny fahatsapantsika dia mandalo fizotra lava be alohan'ny tena hiainantsika azy ireo, noho izany mila manam-paharetana amin'ny tenantsika fotsiny isika.
Mila mianatra matoky ny sain'ny vavony koa isika raha ny momba ny fo.
namana mifosafosa ao ivohonao
Tsy miteny izahay hoe mitsoaka ny faharoa dia manana fisalasalana kely ianao momba ny zavatra iray, fa araho ny fisainanao - raha misy zavatra mahatsapa hoe 'miala', dia mahazatra izany.
Raha mahatsapa fifandraisana mahery vaika ianao na misarika olona iray, araho izany - tsy ho fantatrao mihitsy izay mety hitranga…
Mbola tsy azonao antoka raha mifankatia ve ianao sy ny olon-tianao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
ny fomba ilazana ny bandy tsy ato aminao
ny fomba hitsaharana ny fialonana amin'ny fifandraisako
david dobrik net mendrika 2020
inona no hatao rehefa tsy ao an-tsainao ny mankaleo anao
zavatra mahafinaritra raha mankaleo ao an-trano